I-China JXZ uhlobo oluhlangene umshini wokomisa amazolo ophansi Ukukhiqiza kanye Nemboni |UJuxian
I-Hangzhou Juxian Gas Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Imishini yokukhiqiza i-nitrogen
Imishini yokukhiqiza umoya-mpilo
I-JXO pressure swing adsorption air separation oxygen...
Isihlungi sokunemba okuphezulu kwe-JXJ
I-JXX isikhiphi sikawoyela esisebenza kahle kakhulu
Uhlobo lwe-JXZ oluhlanganisa isomisi sendawo yamazolo ephansi
Umshini wokomisa amazolo ophansi ohlanganisiwe (okufushane kokuthi: umshini wokomisa ohlangene) umshini wokomisa wamazolo osezingeni eliphansi ohlanganisa okomisa okokuqandisa kanye nesomiso se-adsorption.Isomisi esiqandisiwe sinezinzuzo zokungalahleki kwegesi nokusebenzisa amandla aphansi, kodwa sinomkhawulo wezinga lokushisa lamazolo. .Isomisi sinenzuzo yendawo yamazolo ephansi, kodwa ukonakala kokulahlekelwa okukhulu kwegesi egaywe kabusha.
Umgomo wokusebenza we
Umshini wokomisa amazolo ophansi ohlanganisiwe (okufushane kokuthi: umshini wokomisa ohlangene) umshini wokomisa wamazolo osezingeni eliphansi ohlanganisa okomisa okokuqandisa kanye nesomiso se-adsorption.Isomisi esiqandisiwe sinezinzuzo zokungalahleki kwegesi nokusebenzisa amandla aphansi, kodwa sinomkhawulo wezinga lokushisa lamazolo. .Isomisi sinenzuzo yendawo ephansi yamazolo, kodwa ukonakala kokulahlekelwa okukhulu kwegesi egaywe kabusha.Isomisi esihlanganisiwe esiphansi samazolo esakhiwe inkampani yethu sihlanganisa izinzuzo ezihambisanayo zomshini wokomisa obandayo kanye nomshini wokomisa ukumunca, kukhulisa izinzuzo zakho kokubili ngokusebenzisa ukuxhunywa kwamapayipi okuphusile kanye nomthamo womthamo, futhi kuzuza ukusebenza kwezindleko eziphezulu.
Amadryer ahlanganisiwe akhiwa ikakhulukazi okomisa eqandisiwe kanye nokomisa i-adsorption, futhi ngezinye izikhathi anamathiselwe nokuhlunga okuhambisanayo, ukususwa kothuli, ukususwa kukawoyela namanye amadivaysi, ukuze isomisi sikwazi ukuzivumelanisa nemvelo yegesi eyinkimbinkimbi.
● Ingxenye yomshini wokomisa obandayo usebenzisa i-refrigeration dehumidification, inqubo yokuhlukanisa isivunguvungu somoya.Umshini wokomisa wamukela i-pressure swing adsorption, i-adsorption yokushintsha izinga lokushisa nezinye izinqubo.Uma kukhona ukuhlunga okuhambisanayo, ukususwa kothuli, ukususwa kwamafutha kanye namanye amadivaysi, kukhona ukungenela okuqondile , ukungqubuzana kwe-inertial, ukulungiswa kwamandla adonsela phansi nezinye izindlela zokuhlunga.
● Ukusebenza okuzinzile, umsebenzi onokwethenjelwa, ukusebenza okungagadiwe isikhathi eside.
● Umthombo wokushisa okuvuselelayo (ingxenye yomshini wokomisa ifudumeza kancane) ithatha ukushisisa kukagesi, futhi izinyathelo zokuvuselela zisebenzisa ukushisa + ukupholisa okufuthayo.
● Ukusebenzisa owawo umoya owomile njengomthombo wegesi ovuselelekayo, ukusetshenziswa kwegesi okuphansi.
● Ukushintsha umjikelezo omude.
● Ukusebenza okuzenzakalelayo, ukusebenza okungagadiwe.
● Ukucushwa okunengqondo kwezingxenye zesistimu yesiqandisi, izinga lokwehluleka eliphansi.
● Sebenzisa i-electronic ehlakaniphile noma ibhola elintantayo uhlobo lwedivayisi yokukhuculula indle okuzenzakalelayo ukuze ubone umsebenzi wokukhuculula okuzenzakalelayo.
● Ukugeleza kwenqubo elula, izinga lokwehluleka eliphansi, izindleko eziphansi zokutshala imali.
● Kulula ukuyisebenzisa nokuyinakekela.
● Ukusebenza okulula okuzenzakalelayo kukagesi, okunenkomba yemingcele yokusebenza eyinhloko, kanye ne-alamu yephutha edingekayo.
● Imboni yomshini, akukho ukufakwa kwesisekelo sasendlini.
● Ukumataniswa kwamapayipi nokufakwa kalula.
Amandla okubamba umoya 1~Nm3/min
Ingcindezi yokusebenza I-0.6 ~ 1.0mpa (imikhiqizo engu-7.0 ~ 3.0mpa inganikezwa ngokuya ngezidingo zomsebenzisi)
Izinga lokushisa lokungenisa umoya uhlobo lokushisa oluvamile: ≤45℃(Min 5℃);
izinga lokushisa eliphezulu:≤80℃(Min 5℃)
Imodi yokupholisa umoya opholile/amanzi apholisiwe
Indawo yamazolo yomkhiqizo oqediwe -40℃~-70℃(indawo yamazolo emkhathini)
Umfutho womoya wokungena nokuphuma uyehla ≤ 0.03mpa
Ukushintsha isikhathi 120min(okushintshashintshayo)(ukushisa okuncane) 300~600s(okushintshekayo)(akukho ukushisa)
Ukusetshenziswa kabusha kwegesi 3 ~ 6% umthamo olinganiselwe
Indlela yokuvuselela ukuvuselelwa kwe-micro thermal/non-thermal regeneration/okunye
Umthombo wamandla AC 380V/3P/50Hz(ZCD-15 nangaphezulu);AC 220V/1P/50Hz(ZCD-12 nangaphansi)
Izinga lokushisa le-ambient ≤42℃
Okwedlule: Isomisi somoya esivuselelayo sohlobo lwe-JXG
Olandelayo: I-JXX isikhiphi sikawoyela esisebenza kahle kakhulu
I-JXW asikho isomisi esivuselela ukushisa
Idivayisi yokuhlanza ikhabhoni ye-JXT
I-VPSAO vacuum pressure swing adsorption oxygen p...
I-pressure swing adsorption ukukhiqizwa kwe-nitrogen m...
Isomisi somoya esivuselelayo sohlobo lwe-JXG
Uhlobo lwe-JXY isomisi sokuvuselela ukushisa kwemfucuza
Noma iyiphi Inkinga, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.Phendula phakathi namahora angu-24.
Ikheli:188 Charing Village, Fuyang District, Hangzhou, Zhejiang Province